8 အကောင်းဆုံးမွေးနေသောခရီးသွားအကြံပေးချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > U.S.A သွားလာပါ > 8 အကောင်းဆုံးမွေးနေသောခရီးသွားအကြံပေးချက်များ
ခရီးသွားလာရေးစည်းမျဉ်းများကို ဆက်လက်၍ အဆင်ပြေအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ရာများကိုသင်လေ့လာရန်အခွင့်အရေးရှိသည်. အစောပိုင်းကပိတ်ခဲ့သည့်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများသည်ကမ္ဘာသည်ကပ်ရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေရချိန်တွင်တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာခဲ့သည်. ဤတွင်များမှာ 8 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးသွားအကြံပေးချက်များ 2021 စဉ်းစားသင့်ပါတယ်.
ရထားခရီးသွားခြင်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရွေ့လျားမှုပုံစံဖြစ်သည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
ဤဒေသသည်မက်ဆာချူးဆက်အရှေ့ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးအရှေ့ကမ်းခြေရှိခရီးသွား most ည့်သည်အများဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်. တွင် 2021, ၎င်းသည်ဇယားများကိုထိပ်တန်းမွေးနေ့ခရီးသွားနေရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်. ဤနေရာတွင်သင်မြင်နိုင်ရန်များစွာရှိပါသည် လှပသောကမ်းခြေ, ပန်းခြံများ, သမိုင်းဝင်မီးပြတိုက်, နှင့်သဘာဝအပန်းဖြေအများကြီး. သင်ဤမြို့လည်ပတ်နေစဉ်, လုံခြုံသောနေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေရန်အရေးကြီးသည်. ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အားလပ်ရက်အငှားစာများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်တည်းသောဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းတွင်တည်းခိုမည့်အစား, သင်သည်များပြားလှသောဇိမ်ခံကိပ်ကော့ဒ်တွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခများ. မီးဖိုချောင်နှင့်အ ၀ တ်လျှော်ခန်း၊ အစရှိသည့်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောသာယာအဆင်ပြေမှုများကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်အတွက်ယင်းသည်သင့်ကိုအိမ်ကဲ့သို့ခံစားမှုပေးလိမ့်မည် HVAC ကိရိယာများ. ဤသည်အထူးသဖြင့်အခါ, နေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ် မိသားစုနှင့်အတူခရီးသွား သင်၏နေထိုင်စဉ်အတွင်းနွေးထွေးသောအစားအစာများကိုစားရန်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရလိမ့်မည်. ဖြည့်စွက်ကာ, အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခမှာဟိုတယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သီးသန့်တည်ရှိမှုအချို့ရှိသည်.
2. ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးသွားအကြံပေးချက်များ 2021: အလက်စကာ
ပထဝီအနေအထားအရယူနိုက်တက်စတိတ်မှသီးခြားဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, Alaska သည်လည်ပတ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်သာယာလှပသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ကလေးတွေနှင့်အတူနှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမွေးနေ့ ဦး တည်ရာပါပဲ. သင်တိုင်းပြည်၏ဤအပိုငျးကိုသှားသောအခါ, ဝေးလံခေါင်သီသောရေခဲမြစ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်, မြင့်တက်တောင်များ, ဘုန်းကြီး, 12ပေရှည်ဝံ, နှင့်စွန့်ပစ်ကမ်းရိုးတန်းအများကြီး. Alaska ရှိသင်သွားရောက်နိုင်သောထိပ်တန်းနေရာများအနက် Denali အမျိုးသားဥယျာဉ်လည်းဖြစ်သည်, ဘယ်မှာသင်ဝံတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်, ဝံပုလွေများ, နှင့် moose. သငျသညျရေငြိမ်ဝပ်စွာလေးစားအဖြစ်သင်တို့ကိုလည်း Savage မြစ်တလျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်. သင်ငါးမျှားလိုလျှင်, သငျသညျ Alaska ၏ငါးဖမ်းအချက်အချာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရနိုင်သည်, ဟိုးမား. ထို့အပြင်, သင်တောကန္တာရမှထွက်ခွာပြီးအလက်စကာတွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သောကျောက်ချစခန်းသို့သွားနိုင်သည်. သငျသညျမိသားစုနှင့်အတူ Alaska သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ, Fairbanks နှင့် Matanuska Glacier မှတစ်ရက်တာမှ Arctic Circle Day Tour သို့သွားရန်သေချာသင့်သည်. ဒီခရီးစဉ်နှစ်ခုကသင့်ရဲ့ Alaskan အားလပ်ရက်ကိုပြီးဆုံးပါလိမ့်မယ်.
3. အရီဇိုးနားခုနှစ်တွင်ရန်း Canyon အ
နှစ်စဉ် about ည့်သည်ငါးသန်းလာနေသော်လည်း, Grand Canyon သည်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် 2021. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လူကြိုက်အများဆုံးမှတ်တိုင် ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်တိုင်းထောင့်ကနေလှပသောပုံပေါ်ပါတယ်. သင်သည်ဤဒေသရှိတောင်တက်ခရီးကိုသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဝေဟင်မှမြင်ကွင်းမှရှုခင်းကိုခံစားရန်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်စီးနိုင်သည်. ချောက်ကမ်းပါး၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်မှမြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်ရှိ RIM များကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်. လူအများစုကဒီကိုလာလည်ချင်ကြတယ် ဂရန်း Canyon အအမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့ South Rim ကဆောင်းရာသီမှာတောင်ဖွင့်လို့ရတယ်. သဲကန္တာရမြင်ကွင်းကိုပျော်မွေ့ရန်သင်မောင်းနှင်သည့်လမ်းများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဤဒေသရှိခရီးသွားဘတ်စ်ကားများကိုသုံးနိုင်သည်. Grand Canyon မှာ, သငျသညျထက်ပိုကြည့်ဖို့ရနိုင်သည် 447 အဲဒီမှာဖြစ်ကြောင်းငှက်မျိုးစိတ်, တော၌တညဉ့်လုံးနေကြလော့, နှင့်Рафтингကဲ့သို့သောပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန်. ဒီဒေသမှာ, ပျော်စရာအခွင့်အလမ်းများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်!
4. အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးသွားခြင်းစိတ်ကူး 2021: Crater ရေကန်အမျိုးသားဥယျာဉ်
အော်ရီဂွန်တွင်တည်ရှိသည်, Crater Lake သည်စတုရန်းကီလိုမီတာ ၅၃ ခုတွင်တည်ရှိသည်. ရေကန်သည်မာဇမာတောင်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် 7000 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်. ၎င်းတွင်အပြာရောင်ရေများရှိပြီးသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အံ့မခန်းဖွယ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပေးသည်. ဒီရေကန်၏လှပမှုသည်ထိုအရာဖြစ်သည် သငျသညျရေငုပ်ရေငုပ်သွားနိုင်ပါတယ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2000ft အဘို့သင်ပျော်စရာမျိုးကိုဖန်စီလျှင်. ဤtoရိယာသို့သင်၏ခရီးစဉ်ကိုပျော်ရွှင်ရန်, ရေကန်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အံ့ဖွယ်အမှုများအားလုံးကိုစူးစမ်း။ သုံးရက်နေရန်လိုသည်.
စာရင်းထဲတွင်နောက်ဆုံးဒစ္စနေးဖြစ်ပါတယ် ပန်းခြံများ နှင့် Orlando တွင်အပန်းဖြေစခန်း. ဤ ၀ မ်းသာစရာကောင်းသည့်နေရာသည်သူတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများမှလုံးဝငြီးငွေ့သွားသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးဖြစ်သည်. ဤသည်ကိုပြီးဆုံးသောအသိအမှတ်ပြုသူနာပြုများအထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည် NCLEX RN စာမေးပွဲနှင့်ပျော်စရာအားလပ်ရက်လိုအပ်သည်. သူတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်း, ယခုနှစ်စတင်ကတည်းက, ပန်းခြံအများစုသည်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်. မည်မျှရေပန်းစားသည်ကိုပေးသည်, ဤနေရာသည်လူနေထူထပ်သောကြောင့်သင်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုပညာရှိစွာစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်. သင်၏နေထိုင်မှုကိုခံစားရန်, သင်နေဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ် 6-7 ရက်ပေါင်း. သင်ဆွဲဆောင်သောဆွဲဆောင်မှုအချို့ld သည်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ဓားပြများပါဝင်သည်, အခြားသူတွေအကြားပတေရုသပန်ရဲ့ပျံသန်းမှု.
6. အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးသွားနေရာများ 2021: အီတလီနိုင်ငံရှိဗင်းနစ်, ဥရောပ
အီတလီအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်, ဗင်းနစ်သည်ခရီးသွားများကြည့်ရှုရန်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည် Veneto ဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးဖွင့်ထားသည် 118 တူးမြောင်းများကကွဲကွာသေးငယ်တဲ့ကျွန်းများ. ဤကျွန်းများထက်ပိုပြီးဆက်သွယ်ထားသည် 400 တံတားများ. လမ်းမရှိဘူး, အဘယ်သူမျှမဆူညံအသွားအလာအဓိပ်ပာယျ. လူများသည်တူးမြောင်းများရှိလှေများပေါ်တွင်ခရီးသွားကြသည်, အခြားနေရာများတွင်မမြင်နိုင်သောအချို့သောအထင်ကြီး display များနှင့်အတူ the ည့်သည်များအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်. ဗင်းနစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထူးခြားဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, ၎င်းအတွက်ခရီးသွားများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်ထိပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုအဖြစ်အကျယ်ချဲ့ခြင်း 2021. ထို့အပြင်, ဗင်းနစ်သည်၎င်း၏သဘာဝတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရင်ခုန်စရာဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်. ဗင်းနစ်သည်အများဆုံးစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည် လှပသောမြို့ကြီးများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ. ၎င်းသည်ထူးခြားသောလမ်းမရှိသောကမ်းလှမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, အထင်ကြီးစပျစ်သီးကိုအဆောက်အ ဦး များ, နှင့်သမိုင်းဝင်ဒြပ်စင်အားလုံး၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကျော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်.
7. ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးခရီးစဉ် 2021: ရေကန် Baikal, ရုရှားနိုင်ငံ
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခြင်း, ရုရှားကကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည် ကမ်းခြေအပါအဝငျ, တောင်များ, နှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အ ဦး များ. သို့သျောလညျး, Baikal ရေကန်သည်ခရီးသွားများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးရေကန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, အများအပြားအစီရင်ခံစာများကထက်ပိုရဲ့ဟုဆိုကာအတူ 25 နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ. ဒါဟာအစကမ္ဘာပေါ်မှာအနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်ဖြစ်ပါတယ်, အများဆုံးအတိမ်အနက်ကိုရောက်ရှိ 1642 မီတာ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ? Baikal သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးရေချိုအိုင်ဖြစ်သည်. ထက်ပိုပြီး 20% ကမ္ဘာ့သဘာဝရေသည်ဤအိုင်တွင်နေထိုင်သည်. ပတ်ပတ်လည်အဘို့5တစ်နှစ်လျှင်လများ, အိုင်သည်ရေခဲထူသောအလွှာအောက်တွင်ရှိနေသည်. သို့သျောလညျး, အဖြစ်နက်ရှိုင်းကြည့်ဖို့နေဆဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် 40 အောက်မှာမီတာ. ပတ်ပတ်လည်အဘို့ 10 တစ်နှစ်လျှင်လများ, ၎င်း၏ရေသည်ရေခဲသောအပူချိန်အောက်တွင်ရှိသည်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်. သို့သျောလညျး, သြဂုတ်လတစ်လပတ်လည်, ၎င်း၏အပူချိန်အထိတက် 16 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, လျင်မြန်စွာရေကူးခြင်းနှင့် dips အဘို့ကြီးသောအောင်.
တရုတ်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်နည်းပညာအဆင့်မြင့်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်, ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်သောအခါကရှိခဲ့ကျက်သရေနှင့်ညှို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသေးပါဘူး. တရုတ်အကြောင်းဖန်စီနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, သို့သော် Great Wall သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားလုံးတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်. လူကြိုက်များသောတရုတ်စကားများအရ, “ သူမဟာ Great Wall မှာမရှိခဲ့ရင်ဘယ်သူမှစစ်မှန်တဲ့သူရဲကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး”. တစ်အရှည်ကျော်လွန်ပြီးတိုးချဲ့ 6000 ကီလိုမီတာ, ဒီmonရာမအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး က၎င်း၏မျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်ခရီးသွားများအတွက်များအတွက်မဖြစ်မနေ - အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏ပျမ်းမျှအမြင့်ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်6သို့ 8 မီတာ, သို့သော်, ဒါထက်ပိုပြီးကျော်လွန်တတ်၏ 16 ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအမြင့်မှာမီတာ. ဒါဟာထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ် 10 လမ်းလျှောက်သူများကဘေးချင်းယှဉ်။ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်. နံရံတွင်အထင်ကြီးစရာခံတပ်များစွာရှိသည်, သို့သော်, အသက်အကြီးဆုံးသူများသည်ဘီစီ ၇ ရာစုဝန်းကျင်မှဖြစ်သည်. Great Wall သည်တစ်ချိန်ကတစ်သက်တာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ.
8 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးသွားအကြံပေးချက်များ 2021: ကောက်ချက်
သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြလိမ့်မည်နေစဉ် 2020 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သည်, သင်ယခုနှစ်အတွင်းဒီခရီးကိုသွားနိုင်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, သင်၏သိမ်းဆည်းရန်ခြေလှမ်းများအားလုံးကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်. အနည်းဆုံး Cape Cod သို့သွားရန်သင်ရည်ရွယ်သင့်သည်, အလက်စကာ, အဆိုပါ Grand Canyon အ, မီးတောင်ရေကန်, နှင့် Disneyworld. သင်၏ခရီးကိုပျော်မွေ့ရန်ယနေ့သင်၏ခရီးကိုစတင်စီစဉ်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ရထားဖြင့်သင်တတ်နိုင်သလောက်ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြင်များကိုလည်းသင်ခံစားနိုင်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့သည်သင်တို့ဤအရာတစျခုစီစဉ်ကူညီရန်ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည် 8 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ခရီးသွားအကြံပေးချက်များ 2021 ရထားနဲ့.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွားနေရာ ၈ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, / fr သို့ / ru or / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုလဲပြောင်းနိုင်သည်.
BestDestinations မွေးနေ့ သံလိုက်အိမ်မြှောင် TravelDestinations TravelDestinations2021 မန္တလေး